कोरोना भाइरसपछिको विश्व::Nepali News Portal from Nepal
सामान्य अवस्थामा त सरकार, व्यापारिक प्रतिष्ठान र शैक्षिक बोर्डहरूले त्यस्तो प्रयोग कदापी स्वीकार्दैनन्। तर, अहिले हामी सामान्य अवस्थामा छैनौं। संकटको यो घडीमा हामीसँग दुइटा मात्र छनौट सुविधा छ।पहिलो, अधिनायकवादी निगरानी र नागरिक सशक्तिकरणको विषय। दोश्रो, राष्ट्रवादी पृथकता र वैश्विक एकता।
कुनै पनि महामारी रोक्न मान्छेको शरीर भित्रै पसेर निगरानी गर्नुपरे तमाम मानव समुदायले केही नियम पालना गर्नैपर्ने हुन्छ। यसका लागि दुइटा प्रमुख तरिका हुन्छन्।एउटा, सरकारले प्रत्येकको निगरानी गर्ने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्ने। मानव इतिहासमै आज पहिलोपटक प्रविधिले हरेक मान्छेको निगरानी गर्नु सम्भव बनाइदिएको छ। यही कुरा पचास वर्षपहिले रूसको जासुसी संस्था ‘केजिबी’ले पाउँदो हो त, २४ करोड रूसीलाई सजिलै २४ घन्टै पछ्याइरहन सक्ने थियो। तर, उसले न त्यो गर्न सक्यो, न संकलन गरेका सूचनाको उचित प्रशोधन गर्न सक्यो। प्रविधि यहाँसम्म आइनपुगेको त्यो समयमा केजिबीले मानव जासुस र तथ्यांक विश्लेषकको भर गर्नपर्‍यो। जासुसले प्रत्येक नागरिक पछ्याउन सम्भवै भएन।तर, आज यो सब काम सजिलै फत्ते गर्न प्रविधि हाजिर छ, मान्छेको आवश्यकतै पर्दैन।
कोरोना भाइरससँग मुकाबिला क्रममा धेरै सरकारले निगरानीका नयाँ उपकरण परिचालन गरिसकेका छन्। यो काममा चीन अझ अगाडि छ।उसले मान्छेका स्मार्टफोनमार्फत्, अनुहार पहिचान गर्ने लाखौं-करोडौं क्यामरामार्फत् र शरीरको तापक्रम र स्वास्थ्य अवस्था जाँच्न दिने मानिसका मार्फत् यस्तरी सूचना संकलन गर्‍यो, चिनियाँ अधिकारीले कोरोनाका सम्भावित संक्रमितको तत्काल पहिचान मात्र नभई उनीहरूको हिँडडुल र को-कसका नजिक परे भन्ने समेत तत्काल जानकारी संकलन गर्न सक्षम भइदिए। मोबाइलका कतिपय एपले त नागरिकलाई उनीहरू सम्भावित संक्रमितसँग कति नजिक छन् भनेर चेतावनी दिने कामसमेत गरेको थियो।
यस्तो प्रविधि पूर्वी एसियामा मात्र सीमित छैन। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले त्यहाँको सुरक्षा एजेन्सीले आतंकवादी गतिविधिसँग जुध्न प्रयोग गर्ने निगरानीका प्रविधि कोरोना बिरामी पत्ता लगाउन प्रयोग गर्ने अनुमति भर्खरै दिएका थिए। यो कदमलाई सम्बन्धित संसदीय उपसमितिले लागू गर्न अनुमति नदिँदा नेतान्याहुले ‘संकटकालीन प्रावधान’ प्रयोग गरेरै त्यो विरोध निश्तेज पारिदिए। यसमा खास अचम्म मान्नुपर्ने कारण के र? भन्ने पनि लाग्ला।
अहिलेसम्म कसैको औंलाले मोबाइल स्क्रिनमा कुनै लिंक थिच्नेबित्तिकै उसले के हेर्न वा गर्न खोजिरहेको छ भन्ने सरकारले जान्ने प्रयास गर्थ्यो। तर, कोरोनाले त्यो चासो अब परिवर्तन गरिदिनेछ। अब सरकारले त्यो स्क्रिन स्पर्श गर्नेको औंला कति तापक्रमको छ र त्यो औंलाभित्र भइरहेको रक्तसञ्चार प्रवाह कस्तो छ भनेर जान्ने प्रयत्न गर्नेछ।सबभन्दा मुख्य कुरा, हामीलाई जति बेला कसैले निगरानी गरिरहेको हुन्छ, त्यति बेला हामीमध्ये कसैलाई पनि त्यहाँ के-के कुरा तलासी भइरहेको छ र यसले आउँदा वर्षमा के-के फरक ल्याउने छन् भन्ने थाहै हुन्न।निगरानी गर्ने प्रविधिको यति तीव्र विकास भइरहेको छ, मात्र १० वर्ष अगाडिको ‘साइन्स फिक्सन’ फिल्म हामीलाई पुरानो लाग्न थालेको छ।
यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई कति ज्वरो आइरहेको छ भन्ने जानकारी तपाईंभन्दा पहिले त्यो प्रणालीले थाहा पाइसक्नेछ। त्यो प्रणालीले तपाईं कता-कता जानुभएको थियो र को-कोसँग भेट भएको थियो भन्ने पनि थाहा पाउनेछन्। यस्तो अवस्थामा संक्रमण फैलावट तत्काल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र त्यसको तत्काल व्यवस्थापन पनि सजिलो हुन्छ।यस्तो प्रणालीले महामारीलाई केही दिनभित्रै काबुमा राख्न सक्नेछ। यो सब सुनिरहँदा त तपाईं आनन्दित हुनुभयो होला होइन? अब यसको अर्को पक्ष हेर्नुस्- यसलाई मान्यता दिने हो भने यसप्रकारको नागरिकको डरलाग्दोगरी निगरानी राख्नुले पनि साथसाथै वैधानिकता पाउनेछ।
यस्तोमा सरकार र संस्थानहरूले भएभरका सबैको बायोमेट्रिक डाटा राख्न सुरू गरिदिए भने हामीभन्दा पहिले नै हाम्राबारे उनीहरूले जानकारी संकलन गरिसक्नेछन्। र, हाम्रा भावनालाई पनि उनीहरूले ठम्याउने मात्र नभई नियन्त्रित गरेर आफू अनुकूल परिचालन गरिदिन सक्नेछन्। कुन वस्तु किन्नेदेखि लिएर कसलाई भोट दिनेसम्म।बायोमेट्रिक निगरानीले ‘क्यामम्ब्रिज एनालिटिका’को ‘डाटा ह्याकिङ’लाई पनि अब ढुंगे युगमा धकेल्ने भएको छ।
कुनै प्रहरीले चापलुसीपूर्वक ‘गोपनियता र स्वास्थ्यमध्ये के छान्नुहुन्छ’ भनेर सोध्यो भने बुझ्नुस्, समस्या त्यहीँ सुरू भयो। किनकि त्यो सोधाइ नै गलत हुनेछ। हामीलाई गोपनियता र स्वास्थ्य दुवै प्रिय हुन्छन् र दुवै छान्न पाउनुपर्छ।
(हरारीको यो लेख हामीले फाइनान्सियल टाइम्सबाट अनुवाद गरिएको हो ।)